Sheekadeena - Dharka Roobka Chengdu Xinzi CO., Ltd.
Waan U Shaqaynaa
Hordhac Roobkii Xinzi
Xinzi Rain, dhammaan naqshadeeyayaashayadu waxay sahaminayeen marar badan si ay u horumariyaan jiritaanno qurux badan sidii haddii ay u fasiraan sixirka, si fiican u fasireen astaan ​​kasta oo sawir, iyo inay ku dureen tamar xagga ruuxa ah warqadda, oo isku dayaan inay ka dhigaan kuwo dhab ah.
Jiritaano Qurux Badan
Roobabka Xinzi, dhammaan rajabeetodeena sida wanaagsan loo qorsheeyey waxay ka badan tahay shaqo farshaxan marka loo eego rajabeeto.
Qeyb kasta oo ka mid ah sheyga caadada u ah Xinzi Rain wuxuu u baahan yahay habab fara badan oo kala duwan laga bilaabo naqshadeynta qabyada ilaa tolidda, iyadoo la adeegsanayo agabyo kala duwan iyo mashiinno xirfad leh si loo dhammeeyo taas.
Aad U Xiiso Badan
Qaar ka mid ah jaakadaha dhaadheer ama murugsan ayaa xitaa waqti badan ku qaata tolidda. Hadday tahay saxan samaynta ama tolidda, farsamadu aad bay u fiican tahay.
Xinzi Rain wuxuu qeexayaa quruxda adigaa iska leh, fahamsan fikradaha iyo shuruudaha haweeney kasta oo quruxda jecel
Tallaabo kasta oo toliddu waxay u baahan tahay farsamooyin aad sax u ah. Gadaal kasta oo ka mid ah Xinzi Roob-hoosaadka qeexidda sare leh waa shaqada farsamo-yaqaan kasta.
Cirbadda iyo dunta ayaa ah xitaa farsamada nolosha oo dhan. Farsama-yaqaannadu waxay sii wadaan inay dhaxlaan xirfadaha ugu sarreeya ee tolidda dharka hoosta, waxay raacaan qaabka astaanta u ah astaanta, waxayna tolayaan gogosha-qeexidda sare sida dahabka.
Wuxuu qabsanayaa nuxurka farshaxannimadiisa oo muujiyaa, wuxuuna u keenaa xoog dumar kasta oo xiran nigiskii Xinzi Rain, horumarro joogto ah oo beddelaya awooddayda, oo leh awooddan aan hore ugu socdo jacayl.